တရုတ် Professional Tattoo အပူကူးယူစက်၊ လွှဲပြောင်းပရင်တာစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ။ | မော်လမြိုင်
Professional Tattoo Thermal Copier၊ လွှဲပြောင်းသောပရင်တာစက်
(၁) Fuss အခမဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်း - ဖက်စ်စက်တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်
(၄) တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်ကိုရယူပါ
(၆) USB နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောပုံများနှင့်မိတ္တူများကိုထုတ်ယူနိုင်သည်
(7) ယူရန်လွယ်ကူသည်၊ ပေါ့ပါး။ စျေးသက်သာသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သည်
1.Portable သည်မည်သည့်အစဉ်အလာမဆို copiers.It ထက်အလေးချိန်လျော့နည်းသော်လည်း၊ တူညီသည်။
သွင်းအားစုအတွက် 100-240V နှင့်ကိုက်ညီသည့် adapter နှင့်ပြည့်စုံပြီးနိုင်ငံအားလုံး၏ power lead ။
1 x ကိုလွှဲပြောင်းစက်
1 x အင်္ဂလိပ်လက်စွဲစာအုပ်
1 x ပါဝါကြိုး
ပိုကြီးသောပမာဏ, စျေးနှုန်းချိုသာ !!!!!
ထိရောက်သောစကရင်အကျယ်: ၂၁၀ မီလီမီတာ
စာရွက်စာတမ်းအရွယ်အစား - A5-A4
မှတ်တမ်းအထူ - ၀.၀၆ မီလီမီတာ - ၀.၁၅mm
ပါဝါ: AC 110V-220V; 50Hz / 0.46A
ပုံမှန် - အလင်းရောင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှဆွဲဆန့်သည့်အဆိုင်းများ။ ပုံမှန်မိတ္တူပွားစနစ်စတင်သောအခါ၊ ပုံမှန်အလင်းသည်အလုပ်လုပ်သည်။
Deepness 1: ကူးယူထားသောစာရွက်စာတမ်းများကို Deepness မှသတ်မှတ်ရန် ၁ ။ Deepness 1 အလုပ်လုပ်သောအခါ Deepness2ပြတ်သွားသည်။
Deepness 2: ကူးယူထားသောစာရွက်စာတမ်းများကို Deepness 2. သတ်မှတ်ရန် Deepness2အလုပ်လုပ်သောအခါ Deepness 1 ပိတ်သွားသည်။
Stop: ကူးယူခြင်း function ကိုရပ်တန့်ရန်။
ချို့ယွင်းချက် - မီးသည်စက်ပေါ်တွင်မှားယွင်းနေသောအရာတစ်ခုခုကိုပြရန်ဖြစ်သည်။ TPH သည်အပူလွန်ကဲသောအခါအလင်းသည် ဆက်၍ ပေါ်လာသည်။
၁။ သင်ကူးယူခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းလိုပါက“ STOP” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ အကယ်၍ သတိပေးအချက်ပြသံထွက်လျှင် ERROR မီးပွင့်နေပြီးကူးယူခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။
Tattoo Thermal Copier သည် tattoo အနုပညာရှင်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကိုလွယ်ကူသောခြေလှမ်းအနည်းငယ်ဖြင့်ဖယောင်းစက္ကူပေါ်သို့ဒီဇိုင်းများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အကျိုးရှိစွာကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
Tattoo Thermal Copier သည် ၁.၆ ကီလိုဂရမ် / ၃.၅ ပေါင်သာရှိပြီးပေါ့ပါး။ သေးငယ်သောကြောင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ ဘယ်နေရာမဆိုနီးပါး fit ရန်လုံလောက် Compact ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာဘယ်နေရာမဆိုမဆိုအချိန်မရွေးလုပ်နိုင်သည်
ဤတက်တူးထိုးပရင်တာသည်လျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်သောပုံနှိပ်ခြင်းမြန်နှုန်း၊ အပူနိမ့်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်။ သဟဇာတလွှဲပြောင်းစာရွက်အရွယ်အစား: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8.5 လက်မ x ကို 11 လက်မ (W * L) ။ 100-240v ဗို့အားနှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသင့်အတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်ရေရှည်အတွက်တာရှည်ခံသော ABS ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မြင့်မားသောအရေအတွက်တက်တူးထိုးသည့်အနုပညာရှင်များအတွက်တက်တူးစက်လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အချိန်ချွေတာခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့သို့ 32mm MO သံမဏိကျည်တောင့် Adattable Tattoo Grip Tattoo Needle Cartridges
နောက်တစ်ခု: Professional ကြေးနီတက်တူးထိုးကွိုင်စက်သေနတ် CNC ထွင်းထားသည့်ကြေးဝါလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောတက်တူးစက်များ
ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း 32 ည့်သည် ၃၂ မီလီမီတာ
Transparent Disposable Tattoo Grip 25MM နှင့် S ...